दुर्गेश थापालाई आस्थाको कडा जवाफ“न सुर,न ताल” भन्दै लगाइन यस्तो आरोप ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
दुर्गेश थापालाई आस्थाको कडा जवाफ“न सुर,न ताल” भन्दै लगाइन यस्तो आरोप !
Published : 28 July, 2020 8:55 am
छिल्लो समय गीत संगितको नाममा भित्रिरहेको विकृति विसंगतिप्रति गायिका आस्था राउतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । सामाजिक संजालमा एक स्टाटस लेख्दै उनले दर्शकले पनि विकृति भित्राउने सिर्जनालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् ।
स्पष्ट रुपमा नाम नखुलाए पनि उनको निशाना पछिल्लो समय ‘बिच्च बिच्च’ मा गीतबाट चर्चामा रहेका दुर्गेश थापाप्रति रहेको देखिन्छ । केहि दिन अघिदेखि गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका कारण ट्रोलको सिकार भएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा गायक थापाले नारायण गोपालको गीत भन्दै भक्तराज आचार्यको गीत गाएका थिए भने रामकृष्ण ढकालको ‘ओराली लागेको हरिणको चाल भो’ गीतलाई उनले यम बरालको भनेर गाएका थिए । दुर्गेशको यहि विवादित अन्तरवार्तापछि नै आस्थाले उक्त स्टाटस राखेकी हुन् । जहाँ लेखिएको छ –
नाच्ने मान्छे रहरले गाउन थाल्छ,
न सुर सिकेर आउँछ न ताल आउँछ,
अटो ट्युनले आजकल जो पनि गाउने,
के भाको हे दैव गीतहरु सुन्नै नसक्ने ?
युटुबबाट डलर त आउला..
तर म्युजिकल ज्ञान कहाँबाट छाउला !!
हेर्दैछु नेपाली गीत संगीत कहाँ जाँदै छ..
के दर्शकलाई यस्तै चटक नै मन पर्दै छ ??
हैट, अब के चाहिँ गर्नु !!
केहि बोल्नु कि नबोल्नु ??
हेलिकोप्टरबाट ओर्लिएपछि इन्दिरा जोशीलाई प्रेमीको विवाह प्रस्ताव
गायिका इन्दिरा जोशीलाई उनका प्रेमीले विवाहको प्रस्ताव राखेका छन् । प्रेमी शरद केडियाले हेलिकोप्टरमा खुम्बु
गायिका ईन्दिरा जोशीले गरिन् ‘फिल्मी शैली’मा इन्गेजमेन्ट (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
गएको वर्षको फागुन महिनाको पहिलो हप्ता गायिका ईन्दिरा जोशीले आफ्नो हातमा लगाएको औंठीको फोटो सेयर
आज पनि संसदमा लफडा ! ओली आफै उत्रिए बिरोधमा, MCC को बिषयमा चर्काचर्की हेर्नुस …..(भिडियो सहित)
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सभापति अग्नि सापकोटाले बजेटका पूरक विधेयकमाथि छलफलको घोषणा गर्ने
‘प्रियंकाकी सासू रबिना लेख्छिन्: मेरो नातिनी आयाङ्का सबैभन्दा उत्कृष्ट बच्चा…..(भिडियो सहित)
यिका प्रियका कार्की आमा बनेकी छन् । उनले आाफनो सामाजिक संजालमा छोरीसहितको तस्वीर फेसबुकमा सार्वजनिक